တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းနှင့် သတင်းမှန် ဖုံးဖိလှည့်စားမှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းနှင့် သတင်းမှန် ဖုံးဖိလှည့်စားမှု
တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းနှင့် သတင်းမှန် ဖုံးဖိလှည့်စားမှု
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Mar 6, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
ဒီနေ့ Facebook မှာ တပ်မတော်သားကျော်ဇင်ဝင်းဟု အမည်ရသော ရဲဘော်တစ်ယောက်အား ဒေါ်စုကြည်ကို ကြိုဆို၍ အထိုးကြိတ်ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အောက်မှာလည်း တိတိကျကျသိလိုလျှင် ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပြီး ကိုဖိုးချိုထံသို့ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပါနေလို့ ကျွန်တော်အဲဒီဖုန်းကို ချက်ချင်းပဲ ဆက်ပြီးခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ ဆက်သွယ်မှု့ဧရိယာ ပြင်ပသို့ ဆိုပြီးပဲ ပြန်ပြောနေပါတယ်။
မကျေနပ်လို့ နောက်တစ်နာရီခြားပြီးမှ ထပ်ခေါ်လဲ ဆက်သွယ်မှု့ဧရိယာ ပြင်ပသို့ လို့ပဲ ထပ်ဖြစ်နေတာကြောင့် မသင်္ကာတော့ပဲ တိုက်ရိုက် မေးကြည့်ချင်သောကြောင့် အောင်ပန်းGEတပ်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲဘော် ဆီဖုန်းဆက်မေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတပ်မှာ တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းဆိုတာ မရှိကြောင်းနှင့် ထိုကိစ္စအား တင်ဖြေရှင်းတင်ပြရန် တပ်မှုးမှ စီစဉ်နေကြောင်းလဲ သိရပါသည်။
ယခုဓါတ်ပုံထဲရှိ ရဲဘော်မှာ အောင်ပန်းတပ်မှ မဟုတ်ကြောင်းကိုပါ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ထို သတင်းဓါတ်ပုံမှာ တမင်တကာ အမြင်မှားစေရန်… လုပ်ကြံထားခြင်းဖြစ်ပြီး တပ်မတော်အား ပြည်သူမှ အထင်အမြင်မှားစေရန် ရည်ရွယ်ကာ လုပ်ဆောင်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါတယ်။ ထိုပြင် အောင်ပန်းမြို့ထဲသို့ တပ်မှရဲဘော်တစ်ဦး၏ဇနီး မြို့ထဲသို့ ဈေးသွားရာတွင် တပ်ယူနီဖောင်းအကျီဖြင့် အောက်မှ ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ထားသော လူငယ်တစ်ယောက်အား တွေ့ခဲ့ပြီး တပ်သို့ပြောင်းရွေ့လာတာ မကြာသေးသော ရဲဘော်သစ် တစ်ယောက်ဖြစ်မည်ဟု ရိုးရိုးသာ တွေးမိခဲ့ကြောင်းကိုပါ သူငယ်ချင်းထံမှ သိခဲ့ရပါသည်။ သူရဲ့ဆံပင်က ရဲဘော်တစ်ယောက်၏ ဆံပင်မျိုးမ ဟုတ်ဘူး အရပ်ထဲမှ ခေတ်လူငယ်တစ်ယောက် ဆံပင်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ “အခုဓါတ်ပုံတွင် မြင်တွေ့နေရသော လူငယ်မှာ အပေါ်ပိုင်းတွင် စစ်တပ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားပြီး အောက်ပိုင်းက အရပ်ဝတ် ၈ျင်းဘောင်းဘီ ၀တ်ထားသောသူသာ ဖြစ်သည်” ဟု ထပ်မံသိရခဲ့ပါသည်။
လုပ်ကြံဓါတ်ပုံနှင့် လုပ်ကြံသတင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ပေးထားသော ဖုန်းနံပါတ်မှာလဲ ဖုန်းဘက်ထရီပါ ဖြုတ်ထားပုံရပါသည်။ တပ်မတော်အား ပြည်သူမှ အထင်သေးစေရန် ကြံရွယ်ကာ လုပ်ကြံထားသော သတင်းတစ်ခု ဖြစ်နေသောကြောင့် ယခုလို ရေးသားပေး ပို့လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(ဒီအထိက သဘာဝမြေ ဆိုတဲ့ web site တစ်ခုကနေ ယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ web site ကိုလည်း click လုပ်ပြီး သွားလို့ရပါတယ်..။ အောက်မှာ သူဆက် မှတ်ချက်ချ ထားတာကတော့..)
ကျနော်ကတော့ ပုံကို ကြည့်ပြော ရမှာပဲခင်ဗျ.. GE တပ်သည် သူတို့ အင်ဂျင်နီယာ တံဆိပ်ပဲ တပ်တယ်.. တပ်မ နံပါတ်ကို တပ်တာက ခြေလျှင် တစ်ခုပဲ.. နောက်ပြီး တပ်မ ၅၅ သည် တပ်မတပ်မလုံး ရှေ့တန်း မထွက်ရသေး သောကြောင့် ရဲဘော်တွေ အခုလောက် ဆံပင်မရှည်ဘူး.. နောက်တန်းနေတဲ့ တပ်တွေမှာ တပတ်တခါ ဆံပင်ညှပ်မညပ် စစ်ပါတယ်.. တပ်မ ၅၅ လက်မောင်း တံဆိပ်ကြီးနဲ့ GE တပ်ကလို့ ပြောကတည်းက စ မှားနေပါတယ်။
Hlaing Min Nyo : တပ်သားရဲ့လက်မောင်းကဘက်ဟာ GE မဟုတ်ပါဘူး ခြေလျင်တပ်မ ၅၅ ရဲ့ဘက်ပါ နဲနဲစဉ်းစားပြီးမှ ၀ါဒဖြန့်စေလိုပါတယ်……. စော်ကားလိုခြင်းအလျဉ်းမရှိ ပါဘူး…… မဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုရင် ပိုစ့်တင်တဲ့သူသိက္ခာကျတတ်ပါတယ်…
နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူများအဖွဲ့မှာ ကျနော် share ထားတာကိုလည်း ကို James Mmt က မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်..။
James Mmt : ကိုစိုင်းသိန်းဝင်း သူ့လက်မောင်းက တံဆိပ်က တပ်မ ၅၅ လို့ရေးထားတယ်နော်… ဂျီအီးက သူ့တံဆိပ်နဲ့ သူမှလား…..
သူတို့ မှတ်ချက်တွေကို ကျနော် ဒီလို ပြန်ဖြေထားပါတယ်..။
Sai Thein Win : ဟုတ်ပါ့ဗျာ.. ကျနော်လည်း သတိထားမိပါတယ်.. ဟိုဖက်လက်မောင်းတံဆိပ်ကို အကြီးချဲ့ကြည့်လိုက်မှ ဘီအီးဖူး တွေ့ရတာ.. ၅၅ လက်အောက်ခံ ဂျီအီးဖြစ်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်..
Sai Thein Win : ဘီအီး/ဂျီအီး/အီးမီး/ဆစ်ဂ်နယ် တပ်တွေက တိုင်း/တပ်မ လက်အောက်ခံဆိုရင် တိုင်း/တပ်မ ဘက်တံဆိပ် တစ်ဖက် ကိုယ့် ဒါရိုက်ထရိတ် တံဆိပ်က တစ်ဖက် တပ်ရပါတယ်.. စစ်ကျောင်းကြီးတွေ ကပစတွေကျတော့ တိုင်း/တပ်မ လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့အတွက် လက်မောင်းတံဆိပ်နှစ်ဖက်လုံးက ကိုယ့် တပ်တံဆ်ိပ် ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါကတော့ ကို Htet Aung က စတုတ္ထထလှိုင်းမှာ ပေးထားတဲ့ မှတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်..။
Htet Aung : (သတင်းအဆင့်အတန်းအတွက် ကန့်ကွက်ပါတယ်…)
အခုပဲ ဆက်လိုက်တယ်…။ ကိုဖိုးချိုဖုန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့…။ ကလေးလေး တယောက်ကိုင်တယ်…။ ဒေါ်စိုးဝင်းဖုန်းပါတဲ့….။
Htet Aung : အင်တာနက်မီဒီယာလောကမှာ ဖွတာကတော့ လူတိုင်းဖွလို့ရတယ်..။ သတင်းစာကျင့်ဝတ်၊ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နဲ့ တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်တော့ သတင်းအဆင့်အတန်းက အင်မတန်မှ နိမ့်ကျလွန်းပါတယ်..။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေးထားတဲ့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျင့်ဝတ်နဲ့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးမချနိုင်ဘူးဆိုရင် မိမိအခွင့်အရေးက အလိုလို ပျောက်ဆုံးမှာ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မိမိရဲ့ သတင်းထောက် အရည်အသွေးလည်း ဆက်လက်ကျဆင်းနေမှာဖြစ်တယ်…။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်က ယိုင်နဲ့နေမှတော့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံလည်း သွားမနေပါနဲ့တော့ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပဲ နေလိုက်တာကောင်းပါတော့တယ်..။
Sai Thein Win : အောင်ပန်း ဂျီအီးတပ်ကိုသာ ဆက်သင့်ပါတယ်.. ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဖုန်းကို ဆက်ပြီး သတင်းကို confirm လုပ်လို့ မဖြစ်ပါဘူး.. post တင်တဲ့လူကလည်း professional မဟုတ်ပါဘူး..။
ဒါကတော့ YPI က တက်လာတဲ့ သတင်းပါ.. ရဲဘော်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးပုံပါပါတယ်.. ယူနီဖောင်းလည်း အပြည့်အစုံ ဝတ်ထားပါတယ်.. အပေါ်က စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ အောက်က ဂျင်းဘောင်းဘီဆိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး..။
ရှမ်းပြည်နယ် ကလောမြို့ အောင်နိုင်ရေး ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူထုတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်သည့်နေ့က စကားပြော စင်မြင့်၏ လက်ယာဖက်တွင် စစ်ယူနီဖေါင်းနှင့် ရဲဘော်လေး တစ်ယောက် လာရောက်နားထောင်နေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
ထိုရဲဘော်ကလေးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လာရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်ကို ရိုက်ကူးထားခဲ့သည့် ဓါတ်ပုံများသည် အင်တာနက် ဖေ့(စ)ဘွတ်စာမျက်နှာများတွင် ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပြီး ထိုရဲဘော်လေး ဖမ်းဆီးခံထားရသည်ဟူသည့် သတင်းများပြန့်နှံ့နေခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ခိုင်လုံသောသတင်းရပ်ကွက်မှ သတင်းများအရ ဒေသခံတစ်ယောက်က YPI သို့ဆက်သွယ်ပြောကြားရာတွင် ထိုနေ့တွင်လာရောက် နားထောင်ခဲ့သော ရဲဘော်လေးသည် ကလောမြို့မှ တပ်မ၅၅ လက်အောက်ခံ တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းဖြစ်ပြီး အရက်သေစာသောက်စားမှု၊ တပ်စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်မှု စသည့်စွဲချက်တို့ဖြင့် တပ်ချုပ်ရုံးခန်းသို့ ဆင့်ခေါ်ထားခံရသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
(ဒီသတင်းမှာ တပ်ချုပ်ရုံးခန်းဆိုတဲ့ အသုံးအနှူန်းကို မရှင်းပါ..။)
ယူနီဖောင်း အပြည့်နှင့် တပ်သား ကျော်ဇင်ဝင်း (Thway Thit Sar ကိုးကားတဲ့ သဘာဝမြေ က ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသိရတဲ့လူ ပြောသလို အပေါ်ပိုင်း စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး အောက်ပိုင်းက ဂျင်းဘောင်းဘီ ဝတ်ထားတာ မဟုတ်ပါ..။)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် YPI.. တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်းဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ပြောထားတဲ့ကိစ္စလည်း တစ်ခါတည်း ရှင်းသွားပါတယ်..
ကျွန်မလဲမအားလို့အိမ်သာနက်ထဲမရောက်တာ တပတ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ ဒီနေ့မနက်မေးဖွင့်စစ်တော့မှ ကျွန်မမေးထဲဝင်နေတဲ့ တပ်သားကျော်ဇင်ဝင်း နဲ့ပါတ်သက် လို့တွေ့ရတာလေးတွေကူးယူဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မလဲဘယ်ဟာအဖြစ်မှန်လဲဆိုတာတော့သေသေချာချာမသိပါဘူး။ သိတဲ့သူများရှိရင်လဲဖြေပေးကြ ပါအုံး။
နားကို မလည်နိုင်ဘူးကွယ်တို့ရေ …. ။
ဓါတ်ပုံကြည့်တော့လည်း …. စစ်သားရုပ်ရည်မျိုးပါပဲ …. ။ ဒါမှမဟုတ် …၀တ်စရာမရှိလို့… ယူနီဖောင်းယူဝတ်တယ်လို့ပဲ .. ဆိုလိုချင်လေသလား … ။
သတင်းတွေ .. သတင်းတွေ … ပွတာ၊ ဖွတာတော့ … မြန်တယ် … ဇာတ်လမ်း အဆုံးထိ မသိပဲ ငုတ်လျိုးသွားတဲ့ သတင်းတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတာပဲ … ။ ဟိုဂျပန်ပါးရိုက်ကျွမ်းတဲ့ မင်းသမီးလေးရဲ့ ဇာတ်လမ်း …. ၊ အက်ရှင်ကားထဲကလို ကျောင်းသားကို ကြိုးတုတ်တဲ့ ကျောင်းအုပ်ဇာတ်လမ်း … ၊ ငြုတ်သီမနဲ့ … ကြက်သွန် ဇာတ်လမ်း … စသဖြင့် .. သတင်းက ကားပြီး .. အဆုံးသတ်တိတိကျကျ မသိလိုက်တာတွေ အများကြီးပဲ … ။
မီဒီယာတွေရေ …ဖွချင်လည်း ဖွကြပါ .. သတင်းအစဆုံးတော့ … သိပါရစေဗျို့ …
အဲဒီ လင့်ထဲမှာ ဓါတ်ပုံ ၂ ပုံပါလာတယ်။
တစ်ပုံက ဒေါ်စုကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ပုံနဲ့ တပုံက မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ပုံ၊
အဲဒီလူက ဂျင်းဘောင်းဘီ ၀တ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ စစ်သားဖြစ်နေပါတယ်။
facebook မှာတော့ပါတယ်ဗျ ။ နောင်တော်ကြီးများ ခွဲခြားပေးကြပါအုံးဗျာ။
NLD ကိုဖဲ့ထားတဲ့ဆိုဒ်ကတော့ သဘာဝမြေပါတဲ့ဗျာ
တော်စောင့်ကတားပါတယ် ဒါပေမဲ့အမေစုကလက်ယပ်လှမ်းခေါ်ပါတယ်ပေးလာလိုက်ပါတဲ့ သူဘာပြောချင်
လည်း မသိဘူးတဲ့ အဲဒီရဲဘော်ပြောတဲ့ စကားကတော့ (အမေသားတို့ ကိုလည်းပြစ်မထားပါနဲ့ )တဲ့ ဒီလောက်
ဘဲကျွန်တော်သိပါတယ် အဲဒီရဲဘော်ဘယ်ကလာလည်းဆိုတာတော့ မသိဘူးအောင်ပန်း ဟဲဟိုးတပ်ဖြစ်နိုင်
ပါတယ်သချာတာတခုကတော့ ….ကလောမြို့ ခံတပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘာလို့ လည်းဆိုတော့ အဲဒီနေ့ က
အသေချာဆုံးကအဲဒီရဲဘော်ဟာအမှန်တကယ်စစ်သားပါဘဲအဲဒီနေ့ လာတဲ့ သူအားလုံးအဲဒီမြင်ကွင်းကိုအမှတ်ရနေပါတယ်
thet pying phyo says:
Why did someone want to refuse the photo is not soldier, really?
ရဲဘော်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးပုံပါပါတယ်.. ယူနီဖောင်းလည်း အပြည့်အစုံ ဝတ်ထားပါတယ်.. အပေါ်က စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ အောက်က ဂျင်းဘောင်းဘီဆိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး..။
မသဲနုအေးရေ ၊ သတင်းတွေ ကို ထောက်ပြပေးလို့ ၊ တွေးစရာများရပါတယ် ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ၊ အိမ်သာနက် ထဲ ဝင်တဲ့အခါ ၊ ပြုတ်ကျမှာကို လည်း သတိထားစေလိုပါကြောင်း ရယ်ပါလေ ။ ဟီဟိ
ဘာတွေလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ ကြားထဲမှာရန်တိုက်ပေးနေတဲ့သူတွေများရှိနေလားလို့ထင်မိတယ်။ NLD ရယ် ပြည်သူတွေရယ် အစိုးရရယ်ကြားထဲမှာပေါ့။ အစိုးရအနေနဲ့ အမေစုတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်တိုး တက်အောင်လုပ်နေချိန်မှာ အရင်အချိန်တွေကိုပြန်တမ်းတပြီးနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့ သူတွေလဲရှိနေတယ်။ စစ်တပ်အောက်မြီးဆွဲတွေပေါ့။ အာဏာပြန်သိမ်းစေချင်တဲ့သူတွေတောင်ကျွန်မပါတ် ၀န်းကျင်မှာရှိနေတာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တွေ့နေရတယ်။ အခွင့်ရေးကိုတန်းတူရတာထက် အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားဖြစ်ရတာပိုကြိုက်တဲ့သူတွေပေါ့။ ဒီလိုလူတွေကများသွေးခွဲနေသလားလို့ထင်မိပါတယ်။
ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးဘဲထားပါတော့ ဒီလူဟာ တပ်သားတစ်ယောက် အစစ်အမှန်ပါဘဲ။
သူ ကဘယ်တပ်ကဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဒီလို လိမ်နေတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။တို့ တပ်မတော်ကွ
ဒီလောက် အမေစု လာလို့ လူတွေ ပျော်ပြီး ကြိုနေ တဲ့အချိန် အမေစု ကိုတွေ ရဖို့ နှုတ်ဆက်ဖို့တိုးဝေ့ နေရတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ် သူ ကများ စစ်သားအယောင်ဆောင်ပြီး စစ်အင်းကျီနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်မလဲဗျာ..စစ်သားကြံဖွတ် က NLD အယောင်ဆောင်ပြီး အမေစု ကိုလာတွေတယ် ဆို တော်သေး..ဘယ်သူမှလဲ ပြည်သူဒီလောက်မုန်းနေတဲ့ စစ်သား အယောင်မဆောင်ပါဘူးဗျာ ဘယ်သူမှလဲ ဒီခေတ်မှာ စစ်သားမလုပ်ချင်လို့အသက်မပြည့် တဲ့ကလေးတွေ လိုက်ဆွဲနေတာ အားလုံးအသိပဲ ကျွန်တော့ အတွေးပါ..ဒီရဲဘော်လေးကိုတော့ လးစားပါတယ် စစ်သားလေးသာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာ သူ့ အသက်နဲ့ ကိုယ် မြဲ နေပါစေလို့ ပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးပါစေ
ခင်ဗျားတို့သိတာ တစ်ယောက် ထဲ တစ်ကယ် ကြို တာ ကျွန်တော် သိသလောက် ၈၀ ကျော်လောက်ရှိပါတယ် တဲ့ ။ ကျွန်တော့် မိန်းမ နဲ့သမီး
တောင်ပါ ပါတယ် တဲ့ ။………………………….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ကြိုဆို သည့် ရှမ်းပြည် ခရီးစဉ် တွင် စစ်ယူနီ
ဖောင်း ၀တ်ဆင် ထားသည့် တပ်မတော် သား များ နှင့် လက်ရှိ တာဝန်ထမ်း ဆောင် ဆဲ ယူနီဖောင်း ၀တ်မထားသည့် စစ်မှုထမ်း ၈၀၀ကျော် ကြို ဆို ခဲ့ ကြ ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ ထဲ မှာ တွေ့ တဲ့ တစ်ယောက် ကအဲဒီ ၈၀ ကျော်ထဲ က တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အများ စု က တပ်မ ၅၅ နဲ့ အင်း ပြင် ဘက်က တပ် တွေ က ပါ။ မည်သည့်
တပ် မတော် သား ကို မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သွားကြိူ မှုနဲ့
အရေးယူ ထား တာ
တပ်မ ၅၅ တပ်ရင်းမှုး ကိုယ်စား တပ်ရေး ဗိုလ်ကြီး မှ FNG နှင့် တယ်လီဖုန်းဆက် သွယ် ပြောကြား ချက် —————–
(….တပ် အချုပ် ချခံထားရတယ်)…….(သတိထားစေလိုပါကြောင်း …………)
အခြေခံတပ်သားတွေဆိုတာ ခင်ဗျားတို့လို ကွန်ပျူတာ မသုံးနိုင်ဘူး
ပြည်ပအခြေစိုက် ရေဒီရို တွေကို တွန်းအားပေးရတယ်
မြေပေါ်မြေအောက် အဖျက်သမား ငပုကို